Amaqanda aqhekezayo ngesipinatshi ngegalikhi emhlophe kunye ne-asparagus eluhlaza | Ukupheka kweKhitshi
Isipinatshi ngegalikhi emhlophe kunye ne-asparagus eluhlaza
UCarmen Guillen | | Ukutya, Izitya, Iiresiphi zemifuno, Iiresiphi ezikhethekileyo, Iiresiphi ezisempilweni
Namhlanje sikuphathela enye yeeresiphi zethu ezisempilweni kunye "nohlaza". Siphakamise ukuba sifike ngokugqibeleleyo ekusebenzeni kwebikini ngeli hlobo (elingenakunyanga kunye neeveki ezimbalwa) kodwa ngaphandle kokuyeka ukutya okumnandi kunye nokuhluka. Ukuba uyayithanda imifuno, ngakumbi isipinatshi kunye ne-asparagus, le Amaqanda aqhekezayo ngesipinatshi ngegalikhi emhlophe kunye ne-asparagus eluhlaza uya kuyithanda. Zonke izithako zintsha, ekuthi ngazo siqiniseke ukuba yinto esizenza ngokupheleleyo kwaye khange ihambe ngayo nayiphi na indlela yolondolozo kunye / okanye ingqele ngaphambili.
Ukuba ufuna ukwazi ukuba zeziphi izithako esizisebenzisileyo kunye nemali esiyongezileyo nganye kuzo, qhubeka ufunda.
Isipinatshi esimhlophe ngegalikhi kunye ne-asparagus eluhlaza sisitya esifanelekileyo sokutya okunempilo, okumnandi kwaye kwangaxeshanye, ukuthobela ukutya.
Iigram ezingama-500 zesipinatshi esitsha
Iigram ezingama-200 ze-asparagus eluhlaza
Iigloves ezi-4 zegalikhi emhlophe
Into yokuqala esiza kuyenza kukuhlamba i-asparagus eluhlaza kunye nesipinatshi esitsha. Le yokugqibela, yakuba ihlanjwe ngamanzi ashushu, siya kubayekela bakhuphe amanzi. Okwangoku, nge i-asparagus, siya kusika iziphelo kwaye sizishiye zilungele ukujikwa zijikeleziswe ngepani ngeoyile encinci yomnquma. Sifuna ukuwosa kancinane ukuba singabashiyi bewenzile. Nje ukuba sizenze, sizibeka ecaleni kwipleyiti kwaye sizinqumle kwiityhubhu ezincinci.
Kwipani enye apho senze i-asparagus, songeza ioyile yomnquma kwakhona kwaye sidibanisa 4 ikonofile ixutywe kakuhle kwaye isikiwe. Senza okufanayo nakwifayile ye- isiqingatha se-anyanisi. Sibayeka bagxume kancinci emva koko sidibanise isipinatshi esitswe kakuhle.
Sinciphisa ubushushu sisiqingatha kwaye siyashukumisa yonke into kancinci. Isipinatshi siyakukhupha amanzi amaninzi ke xa bephantse bengenamanzi, yongeza i-asparagus kwaye yongeza sal, ipelepele emnyama kunye umgubo wegalikhi. Ukuba siphakamisa ubushushu, amanzi esipinatshi aya kusetyenziswa kwangoko.
Inyathelo elilandelayo liya kuba kukongeza amaqanda amabini kwaye ubaxhokonxe benze la maqanda aqhekeziweyo. Sishiya malunga neminye imizuzu emi-5 kwaye sibekele bucala.
Umendo opheleleyo kwinqaku: yokuqalisa » Izitya » Isipinatshi ngegalikhi emhlophe kunye ne-asparagus eluhlaza
Iminqathe kunye nejinja cream